Costa Azahar - Fiarahamonina Valencien - Espana
Tsidiho ny toerana
Tongasoa eto Costa Azahar
La Costa Azahar Izy io dia torolàlana amoron'ny morontsirak'i Espana amin'ny ranomasina Mediteraneana, miorina ao amin'ny Faritanin'i Castellón, izay noforonina amoron-dranomasina 120 km sy coves.
Ny anarany dia avy amin'ny voninkazo volomboasary, voninkazo volomboasary ary ny vokatra hafa faritany.
Ny tanàna misy ny Costa del Azahar (hatrany avaratra ka hatrany atsimo) dia: Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Alcalá de Chivert, Torreblanca, morontsirak'i Cabanes, Oropesa del Mar, Benicasim, Castellón de la Plana, Almazora, Burriana, Nules, Moncófar , Chilches, La Llosa ary Almenara.
Ny renivohiny dia ny tanànan'ny Benicasim sy Peñíscola, satria ireo tanàna ireo no ifantohan'ny fizahan-tany lehibe eo amin'ny fiarahamonina.
Misy ihany koa fizahan-tany fety be eo amin'ny morontsirak'i Castellón, miaraka amin'ny tolotra mozika toy ny Arenal Sound Festival (Burriana), any Benicássim ny Fetibe Iraisam-pirenena an'ny Benicasim, ny festival Rototom ary ny SanSan ankoatry ny hafa. Fetiben'ny mozika Electrosplash eny amoron-dranon'i Fora-Forat de Vinaroz.
Ny morontsiraka dia ahitana ny toeram-pialan-tsasatr'i Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Oropesa del Mar, Benicasim ary Moncófar, fa koa ny Sierra de Irta, be tendrombohitra iray mifanandrify amin'ny ranomasina.
Azontsika atao koa ny manonona ny honahona an'ny Prat Cabanes-Torreblanca Natural Park, ny Deserto de las Palmas, ary koa ny zaridainan'ny nosy Columbretes 56 km miala ny morontsiraka. Ary farany, tsy afaka manadino ny renivohi-paritany izahay: Castellón de la Plana sy ny tanàna mimanda Mascarell.
Ny Costa del Azahar dia voarafitry ny lalàm-by A-7 sy AP-7 izay mampifandray ny tanàna lehibe rehetra ary mampifandray azy ireo amin'i Valencia atsimo ary Tarragona any avaratra. Ny N-340 dia mihazakazaka manaraka ny morontsiraka mifanila ihany koa.
Avy any afovoan-tany dia mora azon'ny A-3 avy any Madrid ary ny A-23 avy any Teruel sy Zaragoza.
Amin'ny alàlan'ny rivotra, ny seranam-piaramanidina Castellón dia manompo.
- Marina d 'Na